Sucuudiga oo kacsan kadib markii 11 Amiir iyo Wasiiro Xasbiga la dhigay |
Sucuudiga oo kacsan kadib markii 11 Amiir iyo Wasiiro Xasbiga la dhigay
Sucuudiga ayaa qaaday Olole ay kula dagaalameyso musuqmaasuqa, waxaana ololahaa lagu soo xidhay toban Amiir oo ay ku jiraan wasiirro sar sare iyo sidoo kale tobanaan wasiiro hore ahaan jiray, talaabadaas ayaa la sheegay in looga gol leeyahay in lagu cidhib tiro musuqmaasuqa.
Dhaxal sugaha taajka boqortooyada, Maxamed Bin Salmaan, oo gudoomiye u ah guddi cusub oo la dagaalanka musuqmaasuqa loo xil saaray ayaad moodaa inuu gacan bidixaynayo ragga ka soo horjeeda.
Weriye ka tirsan BBC-da ayaa sheegay xil ka qaadista dhawr shaqsi oo dalka magac ku lahaa in ay ka cadhaysiin doono muxaafidiinta. Waxaanu intaa ku daray in Sucuudiga oo ah bulsho nidaam qabyaaladeed ku dhisani aanu diyaar u ahayn is bedel degdeg ah.
Dhanka kalena warbaahinta Sucuudiga ayaa sheegtay in milatariga dalkaasi ku soo riday meel u dhaw garoonka diyaaradaha ee magaalada Riyaad gantaal ay masuuliyiintu sheegeen in laga soo ganay dalka ay deriska yihiin ee Yemen oo fallaagada Xuutiyiintu kula dagaalamayaan xukuumadda Sucuudigu taageerto.
Telefishan ay Xuutiyiintu taageeraan ayaa ku waramay in gantaalku ku dhacay bartilmaameedkii lala beegsanayey oo ah garoonka diyaaradaha Riyaad.
Xuutiyiintu tiro gantaalo ah ayay ka soo rideen xadka labada dal u dhexeeya laakiin midna ma soo gaadhin xarumaha waaweyn ee shacabku deganyihiin.